दशैंको कुनै विशेष योजना छैन : मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट [अन्तर्वार्ता]
ऐतिहासिक रुपमा मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीको दशैं योजना, व्यक्तिगत लवाइखवाई, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र रणनीतिबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग लोकान्तरकर्मी लखन चौधरीले गरेको कुराकानीको अंश :
नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेको बडादशैंको शुभकामना !
सबैतिर उल्लास बढेको छ । दशैंको लागि भनेर व्यक्तिगत के–कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
– हाम्रो देशको सबैले मान्ने पर्व मध्येको एक दशैं हो । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश छ हाम्रो । दशैंको आफ्नै धार्मिक र ऐतिहासिक मूल्य र मान्यता छन् । मेरो व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया तडकभडक कहिल्यै भएन र नगर्ने भन्छुु म त ।
किनभने, हामीले कुनै पनि त्यौहार अथवा चाडपर्व मान्ने कुरा हो । त्यो बहानामा अरुसँग भेटघाट गर्ने मौका पाइन्छ । दुःख सुख बाँड्ने कुरा हुन्छ । त्यसलाई तडकभडक बनाइयो भने त्यति राम्रो गर्दैन । आर्थिक रुपमा पनि राम्रो गर्दैन । मेरो भन्नुहुन्छ भने विल्कुलै सामान्य रुपमा हुन्छ ।
दशैंमा समाजमा विभिन्न विकृति र समस्या समेत देखिने गरेका छन् । त्यसको निराकरण र सर्वसाधारणको सहजताका लागि प्रदेश सरकारले के योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ?
– अब खास गरेर दशैंको समयमा हाम्रा सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । साथीभाइ, परिवारबीच भेटघाट हुन्छ । बाहिरबाट मजदुरी गरेर घर फर्केका हुन्छन् । यो अवस्थामा रमाइलो त खोज्छौं । तर, यो सँगसँगै विकृति पनि भित्रिएका हुन्छन् । त्यसकारण यस्ता विकृतीबाट बच्नलाई पहिलो कुरा त जुन त्यौहार मनाइरहेका छौं, जुन उदेश्यका साथ मनाइरहेका छौं, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
सँगसँगै त्यसलाई विकृति विसंगतिसँग नजाओस् भनेर सचेत हुन उत्तिकै जरुरी छ । यो सँगसँगै प्रदेश सरकारले र यहाँका सबै जिल्लाका प्रशासनिक निकायलाई के भनेका छौं भने, यो अवस्थामा विकृति विसंगतिका कारक तत्वहरूले टाउको उठाउने मौका नपाउन् भनेका छौ ।
सबै जिल्लामा यस्ता उच्छृंखल खालका घटना हुन नपाउन् भनेर सबैले आ–आफ्ना सुरक्षा योजना पनि सारेका छन् । हामी प्रदेश सरकारबाट निर्देशन पनि जारी गरेका छौं । यस्ता त्यौहार एक दुसरासँग भावना बाँड्ने तरिकाले मनाउनुपर्छ । यसमा हामी आफैं पनि सजग हुनुपर्छ । गलत क्रियाकलाप हुन नदिनेतर्फ सरकार पनि सजग छ ।
सम्भवतः तपाईको पहिलो दशैं तराईमा हुँदैछ, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर मनाउन गइरहनुभएको छ । कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
– यो अब, राम्रो नै हो यो । किनभने हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हामीले यो जिम्मेवार पाउनु भनेको जनताप्रति थप जिम्मेवार हुने कुरा नै मुख्य कुरा हो । त्यसकारण हाम्रो देशमा संघीयता पनि नयाँ हो । प्रदेश नयाँ हो र प्रदेशको संरचना नयाँ हो ।
हामी पहिलो चोटी दशैं मनाउँदै छौं । प्रदेश राजधानी, प्रदेश नामाकरण लगायत भइसकेको अवस्थामा यो दशैं आफैंमा खुशीयालीपूर्ण छ । हामीले प्रदेशलाई समृद्ध पार्न प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी दशैंमा मुलुकको राष्ट्र प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष मठ मन्दिरमा दर्शन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको नयाँ अभ्यास भएकाले त्यस्तो केही तयारी गर्नुभएको छ कि ?
– अरुहरूले के–के गर्नुहुन्छ होला । तर, मेरो त्यस्तो कुनै योजना बनेको छैन ।
सामान्यतया नेपालीहरू दशैंलाई मिठो मसिनो खाने र राम्रो लगाउने पर्वको रुपमा लिन्छन् । तपाईलाई मन पर्ने परिकार के–के हुन् र कस्तो पहिरन मन पर्छ ?
– म अलिकति फरक सोच राख्ने व्यक्ति हो । मेरो भनाई के छ भने मान्छे आफूभित्रबाट खुशी रहन्छ, आफ्नो काम, आफ्नो कर्तव्य पालना गरिसकेपछि खुशी हुन्छ, त्यतिखेर नै त्यौहार मान्नुपर्छ । हिजोका तिहार जो हामी अहिले मान्दैछौं, हिजोका समयमा त्यसै अनुसार मानिएका हुन् । हामी सबैलाई थाहा छ ।
मेरो हकमा विशेष रुचीकर परिकार केही छैनन् । म सादा खाना खाने मान्छे हो । विशिष्ट भन्नु केही छैन । पहिरन कुरा गर्दा (आफूतिरै हेर्दै) सर्ट पाइन्ट लगाएको छु । मेरो सबैभन्दा राम्रो यही हो । सधै यही नै लगाउने गर्छु । यही नै मेरो मन पर्ने पहिरन हो ।
कसैकसैले दशैंलाई नियमित कामबाट केही समय विश्राम गर्ने र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने अवसरको रुपमा लिन्छन् । यो राजनीतिक दौडधुप र पदीय जिम्मेवारीले कतिको थकान महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
– त्यस्तो हुँदैन । कस्तो हुन्छ भने, यसमा आफ्नो पर्सनल लाइफ बिताउनेमा मान्छेले ध्यान दिन्छन् होला । हामी एउटा राजनीतिकर्मी हो । हाम्रो लागि जनताको काम, जनताको समस्याहरू जतिखेर पनि हामीबाट समाधान हुन्छन् भने हामीले गर्नुपर्छ ।
हो हामी पनि मान्छे हो, हाम्रो पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । व्यक्तिगत समय पनि हुन्छ नै । तर, हाम्रो लागि सबैकुरा जनता भएकाले जतिखेर पनि जनताको समस्या समाधानको लागि तयार हुन्छौं । अर्कोकुरा, दशैं आयो, यसमा हामी केही पनि गर्नुहुन्न भन्ने म ठान्दैन । त्यसकारण म व्यक्तिगत समय कम गुजार्ने व्यक्ति हो । हामी सामाजिक व्यक्ति हो । व्यक्तिगत हुनको लागि राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्र्छ ।
व्यक्तिगत जीवन बिताउन कहिलेकाहीँ राजनीतिबाट टाढा भएपछि व्यक्तिगत जीवन हुने कुरा रह्यो । केही समय हाम्रो पनि होला । तर, त्यसैको लागि आराम गर्नु पर्छ (हाँस्दै) भन्ने पक्ष मेरो होइन ।
दशैंलाई विजयोत्सवको रुपमा पनि लिइन्छ । तपाईले ठूलो राजनीतिक विजय हात पारेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, यो विजयलाई सार्थक बनाउन जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने अभियानको हालसम्मको विजयलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
– यस्तो छ । यसलाई विजयादशमीसँग जोड्नुभन्दा पनि, मैले लामो समयदेखि राजनीति गरे । जनताको र पार्टीको इमान्दारीपूर्वक काम गरे । संघर्ष गरे । त्योबाट जनताले आफ्नो मत दिएर यहाँसम्म पुर्याए र थप जिम्मेवारी पार्टीले पनि दियो ।
जिम्मेवारीलाई मैले बोध गरेको छु । म के ठान्छु भने, मैले गरेको आफ्नो काम र पार्टीले दिएको जिम्मेवारीका साथै जनताले दिएको थप जिम्मेवारीलाई मैले आमजनताको विजय मानेको छु । जनताको काम मात्रै कसरी गर्न सकिन्छ, मेरो चिन्ता हो ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कायापलट नै हुने र समृद्धि आउने नारा स्थापित गरिएकाले जनतामा त धेरै आशा छन् नि ! विजयादशमीको अवसरमा केही प्रण गर्नुहुन्छ कि ?
– यो त, जतिखेर हामीले राजनीतिमा लाग्यौं, त्यतिखेर नै प्रण गरिसकेका थियौं । यो समाज बदल्नुपर्छ । बदलेर यो समाज नयाँ बनाउनुपर्छ भनेर । विकासको हकमा, सामाजिक रुपान्तरणको हकमा र सबैलाई अधिकार सम्पन्न गराउने हकमा ।
त्यसकारण हिजोदेखि नै हामीले त्यो गरेर यहाँसम्म पुगेको हो । यो सँगसँगै जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ, संघीयतालाई बुझ्ने र बुझाउनेमा केही कमी रहेको कारणले नै कसैले संघीयतालाई एकैचोटी कायापलटै हुन्छ भनेर बुझिरहेका छन् । कसैले यो संघीयता खतम हो, यसले केही पनि गर्न दिँदैन भनेर बुझिरहेका छन् ।
यो दुइटै बुझाइ अलि अति नै हो । तर मलाई लाग्छ, संघीयता भनेको नै जनतालाई नजिकबाट जनताको सेवा गर्ने हो । अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । अधिकार नपाएकालाई अधिकार सुनिश्चित गराउने हो र आफ्नो विकास आफैं गर्ने अधिकार सम्पन्न हुने हो । त्यो अनुसार अगाडि बढ्नेमा हामी लाग्नुपर्छ । त्यो नै सत्य हो ।
केन्द्र सरकारसँग तालमेल नमिलेको र अधिकार क्षेत्र प्रष्ट भई नसकेको अवस्थामा कतै जनताले गरेको विश्वासमा धोका हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता लाग्दैन ?
– यस्तो छ, यसमा नमिलेको भन्दा पनि संविधानले जुन कुरा प्रष्ट गरेको छ । प्रदेशको अधिकार, संघको अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार । त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दाखेरी केही ढिला भएको हो । नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
किनभने संविधानले नै अधिकार दिएकोले ३ वटै सरकार अधिकार सम्पन्न छन् र केही कुरामा हामीले समन्वय गरी जानुपर्ने । सहअस्तित्वसहित जानुपर्ने । सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा केही ढिला भएको छ । यो कुरा मिल्छ । मिल्नुपर्छ ।
दशैंको मुखमै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार बृद्धि भयो । यो बढ्दो आकारले प्रदेश सरकारमाथि बोझ थपिएको हो या बाँडिएको हो ?
– बोझ भन्ने कुरा होइन । यो कस्तो हुन्छ भने, योभन्दा पहिले हामी बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । अब बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि छौं र कानून निर्माण पनि तीब्र रुपमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा हाम्रो जिम्मेवारीसँगै काम पनि बढ्दै जान्छ ।
जतिजति हामी व्यवस्थित हुँदै जान्छौ, त्यति–त्यति नै हाम्रो काम बढ्दै जान्छ । जिम्मेवारीको हिसाबले आवश्यकता भएको हो । बोझको रुपमा यसलाई बुझनु हुँदैन ।
– आमसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी नयाँ प्रक्रियामा छौं । यसलाई स्थापित गर्न, त्यसलाई विकास गर्न, त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउनको लागि केही समय लाग्छ । ६–७ महिनाको अवधिमा केही भएन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
तीव्र गतिमा यो प्रदेशको विकास गर्नको लागि सबै समुदायको पहिचान, संस्कृति, सहअस्तित्व सहितको विकास हामीले गर्ने हो । यसमा सबैको साथ चाहिन्छ । यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु ।